University of Leicester - Fianarana in United Kingdom. Education Rahalahy
Aza adino ny discuss University of Leicester
Oniversiten'i Leicester dia nanorina efa ho zato taona lasa izay tao amin'ny taorian'ny Ady Lehibe. Ny lehilahy sy ny vehivavy izay nanorina ity fikambanana vaovao nanantena fa tsy ho velona fotsiny fahatsiarovana ho an'ny maizina ny vao haingana lasa, fa ny Fanilo ny fanantenana momba ny hoavy. Ny tanjona dia ny fanatitra atao amin'ny ady tokony hankalazaina amin'ny alalan'ny fanabeazana sy ny fikarohana izay hanova izao tontolo izao ho tsara kokoa.
University of Leicester no nanolotra izany fanirian-daza fatratra.
University of Leicester efa nanomboka stratejika vaovao drafitra, izay mametraka avy ny fahitana ny asan'ny mpisava lalana iray mampiavaka sangany vaovao ny fikarohana-mafy anjerimanontolo. Topazo maso ny stratejika Plan vohikala mba hahitana ny fomba mikasa ny hanao izany.
Ny soatoavina taratry ny teny filamatra. Ny hanao izay marina ny fanantenana sy ny zavatra andrasana avy amin'izay eo izay tsorony ankehitriny mitsangana, miezaka ny hanao fiovana amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika.
Ankehitriny ny University dia mavitrika, mavitrika sy maneran-fiaraha-monina, izay nanokan-tena sy manan-talenta ny olona no niandry, miasa mankany ary manampy ny mamolavola ny hoavy.
University of Leicester dia nanao fikarohana na ny hanatanterahana izay mamonjy, kokoa ary mampitombo fiainana, ary manamora ny fanatevenana ny fampianarana sy ny fianarana ny tontolo iainana izay manova ny hoaviny ny mpianatra ary ireo dia handeha ho vokany. Fantaro ny momba ny sasany ny lehibe indrindra hitan'ny.
Sary an-tsaina ny maha-isika University mivelatra ny talenta, tsy tombontsoa sy azon'ny rehetra ny fahaizana mba handray soa avy amin'ny fianarana ambony.
Mpianatra sy mpiasa amin'ny fon'ny University
Ny mpianatra sy ny mpiasa any amin'ny fony ny fanirian-daza ary dia izy ireo izay hanampy antsika hamonjy azy. Ny nizara soatoavina na aingam-panahy sy vonton'ny ny zavatra rehetra ataontsika:
Fizarana ny fanoloran-tena tsara
Fanajana sy mankasitraka ny olona ao amin'ny kolontsaina ny fitokisana sy ny tsy fivadihana
Championing ny fahalalahana akademika sy ny maha zava-dehibe ny adihevitra mahasoa
Recognising sy mankalaza zava-bitany sy ny fahombiazana
Antoka fa ny fanapahan-kevitra raisintsika momba ny fampianarana ireo mpianatra mifantoka foana
Fikarakarana zava-baovao sy mamaha olana mamorona
Nahalala fa miasa tsara kokoa isika rehefa miara-miasa
Ny hoe sahisahy sy ny fanekena fa tsy misy fahadisoana, fiovana sy ny zava-baovao tsy hain'ny
Ny hoe tompon'andraikitra amin'izay ataontsika sy ny fampanantenana
Mitarika amin'ny alalan'ny ohatra sy ny manao izay lazaintsika dia hataonay
toekarena, Finance sy ny Accounting
Ianao ve mila discuss University of Leicester ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: University of Leicester ofisialy Facebook
London School ny Toekarena London